Iftiiminta Waqooyiga Iftiiminta '' duufaanka '' ee Kanada | Saadaasha Shabakadda
Sawirka iyo Muuqaalka: Muuqaalka »duufaanka» Nalalka Waqooyiga Kanada
Monica Sanchez | | Sawirro, Saadaasha Shabakadda
Nalalka Waqooyiga waa kuwa ugu caansan ee dabiiciga ah ee xilliga qaboobaha. Daawasho ay reer Kanada ku raaxeysan karaan dhowr saacadood ka dib xilligii jiilaalka iyo taas NASA ayaa sawirka ku qabatay kooxda band-ka maalinlaha ah (DNB) qalabkaaga VIIRS (Suugaanta Naqshadeysan ee Sawirka Radiometer Suites, ama Visible Infrared Radiometer ee Isbaanishka) ee dayax gacmeedka Suomi NPP.
DNB waxay ogaataa calaamadaha iftiinka daciifka ah sida auroras, dhalaalka hawada, dabka gaaska, iyo iftiinka dayaxa. Munaasabadaas, waxay ka aragtay aurora borealis "duufaan" waqooyiga Kanada.
1 Sidee auroras u dhacdaa?
2 Fiidiyowga Nalalka Waqooyiga ee Kanada
Sidee auroras u dhacdaa?
Auroras waa ifafaale caan ku ah ulaha, woqooyi iyo koonfur labadaba. Markay ka dhacaan cirifka koonfureed, waxaa loo yaqaan koonfurta auroras, iyo markay ka dhacaan cirifka woqooyi, sida nalalka waqooyiga. Labadaba waxay dhacdaa markay dabaysha qorraxdu isku dhacdo dhulka magnetka dhulka. Marka sidaas la samaynayo, tamarta ayaa kala fidsan oo ku urursan gudaheeda, illaa khadadka aagga magnetka ay dib isugu xirmaan oo ay si lama filaan ah u sii daayaan, iyadoo elektaroonigana dib ugu celinaya meeraha.
Mar haddii ay qaybahaasi isku dhacaan qaybta sare ee jawiga, waxa aynu u naqaanno aurora ayaa la soo saaraa, taas oo ah ta keenta in cirrada gobollada ciriftu midab yeeshaan.
Fiidiyowga Nalalka Waqooyiga ee Kanada
Hadda waxaan ognahay sida loo soo saaro, aan ku raaxaysanno. Waxaan ka fogaan karnaa tiirarka, laakiin ugu yaraan marwalba waan haysannaa fiidiyowyada. Dabcan, midkani runtii waa mid cajiib ah:
Kanadiyaanku waxay lahaayeen, shaki la'aan, bilowga xilliga ugu qabow sanadka sanadka ugu ugu quruxda badan uguna xiisaha badan, miyaadan u malayn? Nalalka woqooyi waxay soo jiitaan fiiro badan, maxaa yeelay waad ogtahay taas, haddii aad nasiib u yeelato inaad aragto, waxaad u badan tahay inaad la yaabto. Dhaqdhaqaaqiisa iyo midabkiisa ayaa umuuqda mid laga soo qaatay riyo, taas oo, nasiib wanaag, ay dhab tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirka iyo Muuqaalka: Muuqaalka »duufaanka» Nalalka Waqooyiga Kanada
Waa maxay meesha ugu qalalan adduunka